Maxaa ka dhacaya wadanka Ukraine yaase ku dagaalamaya. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Maxaa ka dhacaya wadanka Ukraine yaase ku dagaalamaya.
Maxaa ka dhacaya wadanka Ukraine yaase ku dagaalamaya.
Muqdisho (Walwaal Online)- Ukraine ayaa waxay la dagaalamaysaa, gooni goosadyada ay taageerto Ruushka ee bariga Donetsk iyo Lugansk, tan iyo 2014-kii, kadib markii Xukuumada Moscow ay ku dhawaaqday in iyadu maamusho gacanka Crimea.
Previous articleJubbaland oo faah faahisay Kulankii Axmed Madoobe & Wakiilo ka socday Beesha Caalamka
Next articledid you want to know Somali spoilers?